Abadlali edume kunazo blues
abaculi Blues cishe abakaze bajabulele ukuthandwa efanayo njengeNkosi Pop, hhayi kuphela ezweni lethu kodwa futhi ezweni of lesi sitayela - e-United States. Ukushaywa Complicated, ezincane namanothi kanye vocals ehlukile ngokuvamile dudula izilaleli mass ejwayele isigqi kakhudlwana elula.
Ngazuza abaculi omkhulu nodumo ngubani sebejwayele umculo abamnyama base Ningizimu futhi wadala amagama ahlobene kufinyeleleke kalula (isigqi kanye blues, Boogie-Woogie futhi rock and roll). superstars Abaningi (Little Richard, Chuck Berry, Rey Charlz nabanye) Waqala inkambo yakhe njengoba blues wengoma futhi ngokuphindaphindiwe kubuyela imisuka.
Blues - akusiwona nje umculo, kungcono isitayela kanye nendlela yokuphila. Alien kuye iyiphi ukuzihlonipha nethemba okungenangqondo - izici ejwayelekile pop. kwakheka igama isitayela is kusukela ibinzana blue amademoni, okusho ngokoqobo "amademoni blue". Kuyinto lezi zidalwa ezimbi esihogweni ihlushwe umphefumulo umuntu ongasho konke okungalungile ngaphakathi lo pilo. Kodwa amandla umculo ubonisa zokungazimiseli ukuba bazithobe izimo ezinzima futhi uzwakalisa ukuzinikela kwayo okugcwele ukubhekana nazo.
Folk umculo, stylistically savela ngekhulu XIX, liye laziwa ngezilaleli mass eko kwekhulu esilandelayo. Huddy Ledbetter futhi Lemon Jefferson, ethandwa blues abaculi lokuqala, ngomqondo waphula Monolithic kwamasiko isithombe "Eyikhulu Jazz" futhi buhlanjululwe lapho ukubusa bands omkhulu umsindo omusha. Memi Smit Crazy Blues eqoshiwe irekhodi ukuthi baba ngokuzumayo bemthanda Abamhlophe namakhaladi.
Namathathu banesifo esibi futhi forties kwekhulu XX baba nale nkathi Boogie Woogie. Lokhu isiqondiso omusha libhekene ukwanda indima izinsimbi zomculo ezishaywayo, ukusetshenziswa ka iziginci zikagesi kanye nezinhlaka, Ukushaya ijubane futhi ngakhula vocals ekhululekile. ngokuvumelana Ubude lamahubo lilingana, kodwa umsindo eduze ngangokunokwenzeka ukuze ukunambitheka namaphunga izintandokazi izilaleli mass. abadlali eqaphelekayo ka blues mid- futhi forties sekwephuzile - Dzho Terner, Dzhimmi Rashing, Robert Johnson - wakha sisekelo lokuthi eminyakeni embalwa kamuva yayiyobizwa ngokuthi rock and roll, nazo zonke izici isici lesi sitayela (umsindo elicebile nelingubhongoza, ukudala, njengoba umthetho, abaculi amane , umdanso isigqi kakhulu wamphakamisela ngendlela esiteji).
Abaculi blues Isiqalo forties - sixties, ezifana BBC, iNkosi, Sonny Boy Williamson, Rut Braun, Maddi Uoters, Besi Smith kanye nabanye abaningi baye wadala yobuciko ukuthi bacebisa yengcebo umculo emhlabeni kanye nemisebenzi abangazazi nhlobo izilaleli zanamuhla. Jabulela lokhu umculo, abalandeli ezimbalwa kuphela abakwaziyo abasiqaphelayo ukuqoqa okuqoshiwe abaculi abayizintandokazi zakho.
Popularize uhlobo eziningi zanamuhla blues abadlali. abaculi Foreign ezifana Eric Clapton futhi Kris Ri, futhi ngezinye izikhathi enze izingoma ezibhalwe albhamu ne zabuna ubudala, wenza umnikelo omkhulu ekwakhekeni isitayela.
blyuzoviki Russian ( "Chizh & Co", "Road kuya eMississippi," "Blues League", njll) Uhambile ngendlela yabo. Zakha izingoma zabo lapho, ngaphezu ejwayelekile Ihubo ezincane, zidlala indima imibhalo kuyindida ezibalulekile, ezwakalisa zonke ukudlubulunda kuyafana futhi engilakhele isithunzi sobukhulu indoda omuhle ngubani ezimbi ...
Philharmonic Petrozavodsk: umlando, izithombe, repertoire, ikheli
Ruslan Sharipov - Biography nemisebenzi
Biography zabantu abadumile: emingaki kuyinto Selena Gomez
Waist Barnett: umsebenzi, biography, ubuhlobo nge Robert Pattinson
Biography Iosifa Prigozhina: indlela kusuka Dagestan eMoscow
Kuyini ithoni umculo. Iculo Key. Ezinkulu, Ezincane
Le ndlela yokwenza inkolelo-mbono yokuziphendukela umthetho futhi umsebenzi wayo
Umlingisi uGalina Loginova: biography, ifilimu nezithombe
Psychology. amakhono Ukuxhumana - Iyini?
Ukugembula amadayisi ekhasino: igama nemvelo
Sezimpahla zokubhukuda "Imfihlo kaVictoria" - okunethezeka okungabizi
Indlela Zinciphisa isifiso
Indlela ukufihla ipayipi endlini yangasese: ukwabelana imibono Ingaphakathi
Kwekhanda kwesitayela ku izinwele ezinde ngenxa round ubuso
Kıvanç Tatlıtuğ: Biography, izithombe
Carburetor Vaz-2101. Kit carburetor. Indlela ukukhetha carburetor phezu Vaz-2101?